राजनीतिक विश्लेषक भन्छन् ‘सरकारको कामबाट जनता निराश छन्’
काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषकहरूले सरकारको एक बर्षको काम देखेर जनता निराश देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । दुइ तिहाइको सरकारसँग जति अपेक्षा गरिएको थियो त्यसअनुरुप प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसकेकाले जनतामा सरकारप्रतिको भरोसा घटेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
बुधबार रिपोर्टस क्लब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले आगामी चार वर्षसम्म पनि सरकारको गतिविधि यस्तै रहिरहे जनताको आशा र भरोसा समाप्त हुने टिप्पणी गरे । मुलुकमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार हुँदापनि जनताले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको आरोप लगाए आचार्यले लगाए । उनले भने,‘राजनीतिक स्थायित्व भएको, कम्युनिष्ट एकता भएको र दुई तिहाईको सरकार भएकोले जनताले विकास र समृद्धि द्रुत गतिमा होला भनेर आशा गरेका थिए, तर त्यस्तो भएन ।’ उनले अहिले विकास खर्च २२ प्रतिशत पनि हुन नसकेको बताए ।
उनले भने,‘अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको कारण सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको पनि उनले आरोप लगाए । उनले भने,‘प्रतिपक्ष त अहिले सडक र सदन कहीँपनि छैन् । ७ वटै प्रदेशमा कांग्रेस छैन् । त्यही भएर सरकार निरंकुश बन्न खोजिरहेको छ । पशुपति शर्माको गीत प्रकरण पनि त्यसैको कडी हो । सरकारमात्रै होईन, कांग्रेस पनि असफल भएको छ।’ यद्धपी उनले सरकारसँग अहिले नै आशा नै मारिहाल्नुपर्ने अवस्था भने नआएको स्पष्ट पारे ।
उनले भने,‘यो सरकारसँग आशा गर्ने ठाउँ अझै छन्, यो सरकारसँग चार वर्ष समय छ, सरकार फिर्छ भने राम्रो गर्न सक्छ । प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि जुर्मुराउनुपर्छ । प्रतिपक्षी जुर्मुरायो भने धेरै कुरा हुन्छ ।’ उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असफल भए प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने पनि तर्क गरे । उनले भने,‘ओलीजी असफल हुनुभयो भने नेकपाबाट प्रचण्ड अगाडि आउने सम्भावना छ । तर, यसको लागि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेलले ओलीविरुद्ध च्यालेन्ज गर्छन् । र, उनीहरुले नै प्रचण्डलाई अघि सार्छन् ।’
उनले यो एक वर्षमा सरकारमात्रै नभएर कांग्रेस पनि असफल भएको दाबी गरे । उनले भने,‘कांग्रेस चुकेकै हो । त्यही भएर चुनाव पनि हार्यो । चुनाव हारेलगत्तै सभापति देउवाले राजीनामा दिनुपर्दथ्यो । कांग्रेस अहिले ट्रयापमा छ।’ जनताहरु गतिशिल बनेको अवस्था भएपनि कांग्रेसका नेताहरुलाई ल्यापटपनि चलाउन नआउने उनको आरोप छ ।
उनले भने,‘कांग्रेस सभापति देउवाले केही बोले भने उनले ठीक बोलेनन भनेर सबैभन्दा पहिले उनकै गृहजिल्ला डडेलधुरामा विरोध हुन्छ । कांग्रेसमा धेरै बुढाखाडा छन् । एउटा फाईल बढुवा भएर नेता हुनेछन् । अर्को वंशको आधारमा कांग्रेस हुनेहरु छन् । विपीको छोरो, गणेशमानको छोरा, गिरिजाकी छोरी र महेन्द्रनारायण निधिको छोरोहरु वंशको आधारमा नेता भएका छन् । छाताधारी कांग्रेस त छँदैछन् । गगन थापा, प्रदिप पौडेल र गुरु घिमिरे लगायतका अर्को युवा पुस्ता पनि कांग्रेसमा छ, तर उनीहरुलाई कांग्रेसी नै मान्दैनन् ।’
कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक प्राडा. सुरेन्द्र केसीले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा जनताले कुनै किसिमको नतिजा नपाएको आरोप लगाए । उनले भने,‘कुनै पार्टीसँग नजोडिएका पशुपति शर्माले जनताको भावना बोकेको गीत गाउँदो यो सरकार डरायो, पछिल्लो ५६ घण्टा त शर्माको गीतले नेपाल तातेको छ । उनले गाएको गीत धेरै कुरा जनताको भावनाको दर्पण हो ।’
ओली सरकार एउटा गीतको पछाडि लाग्नु भनेको अराजकता देखाउनु भएको पनि उनले टिप्पणी गरे । नेपालको आन्तरिक कारणले राजसंस्था आउनै नसक्ने उनको ठोकुवा छ । तर, बाहृय कारणले राजसंस्था आयो भने कसैले रोकेर पनि रोक्न नसक्ने उनले दाबी गरे । उनले भने,‘हाम्रो देशमा अहिलेपनि राजा छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन् । नेपाली जनताको कति उदार मन छ । राजा तथा महाराजाहरुले यो देशमा धेरै गरेका रहेछन् । यो देश जोड्ने तन्तु भनेको नै पहिलो कुरा राजा हो, दोस्रो नेपाली भाषा र तेस्रो हिन्दू धर्म हो ।’
संस्कृतविद् प्राडा. रमेश ढुंगेलले सरकार सफल वा असफल भन्नुभन्दापनि व्यवस्था नै असफल भएको दाबी गरे । उनले भने,‘धर्मनिरपेक्षता र संघीयता लागु गर्दा जनताको मत लिइएन् । अहिले लोकतन्त्र र संघीयता दुवै फंक्शनिङ छैन् ।’ सरकारले विभिन्न निकायमा नियुक्ती गर्दा ज्ञाताहरुलाई नियुक्त नगरेको पनि उनले गुनासो पोखे ।
उनले २१ अर्बका ९ सय ६ ओटा ठेक्कापट्टामा ६ सय २३ परियोजनाहरु अहिले लथालिंक अवस्थामा रहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘यसरी कसरी समृद्धि हुन्छ ?’ अब देश कता जान्छ त ? भनेर पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘अहिले त सिस्टम नै फेल भैसक्यो । गणतन्त्र फेल भैसक्यो । संघीयता फेल भैसक्यो । लोकतन्त्रले फंक्शनिङ गरिरहेको छैन् ।’
प्रकाशित ८ फाल्गुण २0७५ , बुधबार | 2019-02-20 11:59:56